सिड्नीका उडान स्थगित हुँदा एयरपोर्टमा यात्रीको विजोग ! « KBC khabar
सिड्नीका उडान स्थगित हुँदा एयरपोर्टमा यात्रीको विजोग !
८ पुष २०७८, बिहीबार २३:२७
बिहीबार र शुक्रबार क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा अष्ट्रेलियाको सिड्नीबाट अन्यत्र शहरमा जान लागेका उडानहरु स्थगित हुँदा यात्रको विजोग भएको छ । सैयौं यात्रीहरुले चाडवाड आफ्ना आफन्तसँग मनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जेटस्टार र भर्जिन अष्ट्रेलियाले दर्जनौं उडानहरु स्थगित गरिदिएका छन् । उनीहरुले रद्द गरेका यी उडानका यात्रीहरुले यात्रापूर्व अन्य राज्यहरुको नियम अनुसार गरिएको पिसीआर टेष्ट, यात्रा अनुमति लगायतको प्रक्रिया फेरि गर्नुपर्ने भएपछि अब यस पटकको चाडमा उनीहरुले आफन्तजनसँग मनाउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विमान कम्पनीहरुका अनुसार कम्तिमा पनि ३५ वटा फ्लाईटहरु सिड्नीबाट अन्य शहरमा जाने रद्द भएका छन् । अधिकांश सिड्नीबाट मेलबर्न उड्ने उडान रद्द भएका हुन् । सडकमार्गबाट मेलबर्न आउन कम्तिमा ९ घण्टा यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विमानबाट भने एक घण्टामा नै पुग्न सकिन्छ ।
बताइए अनुसार भर्जिन अष्ट्रेलियाले सात वटा फ्लाईटहरु सिड्नीबाट मेलबर्न र ब्रिसबेनका लागि रद्द गरिदिएको छ । यस्तै अन्य ६ वटा उडान सिड्नीबाट गोल्डकोष्ट उड्नुपर्नेमा आज शुक्रबारको तालिकाबाट सारिएको छ । यस्तै अन्य केही सिड्नीबाट ब्रिसबेन, क्रेन्स, गोल्डकोष्ट लगायतमा जाने उडान पनि रद्द भएको छ ।
उता जेटस्टारले कम्तिमा पनि १४ फ्लाईटहरु रद्द गरिदिएको छ । दशवटा क्वान्टास र जेटस्टारको सिड्नी र ब्रिसबेनका उडानहरु रद्द गरिएका छन् । यसरी अन्तिम समयमा उडान रद्द हुँदा यात्रीहरुमा आक्रोश देखिन्छ । अन्य राज्यमा जानकै लागि यात्रापूर्वको परीक्षणका कारण कैयौं पिसीआर परीक्षण क्लीनिकहरुमा लामो लाईन देखिएको थियो । कतिपय ठाउँमा त क्षमताभन्दा बढी सेवाग्राही आएका कारण बन्द समेत गरिएको थियो ।